ဂျပန်နိုင်ငံကအစားအစာတွေဟာ စိတ်ချရရဲ့လား? Trans-Fatty Acids ရဲ့အန္တရာယ်။ - JAPO Japanese News
ဂျပန်နိုင်ငံကအစားအစာတွေဟာ စိတ်ချရရဲ့လား? Trans-Fatty Acids ရဲ့အန္တရာယ်။
ကြာ 24 Feb 2022, 19:00 ညနေ
ဂျပန်မှာရောင်းချနေတဲ့ margarine ဆိုတာကို စာဖတ်သူတို့သိကြပါသလား?
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ဒါမှမဟုတ် တိရစ္ဆာန်ဆီကိုအခြေခံပြီး ထောပတ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပြုပြင်စားသောက်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဂျပန်မှာပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုကြတဲ့ စားသောက်ကုန်ဖြစ်ပြီး၊ စူပါတွေမှာတောင်အလွယ်တကူဝယ်နိုင်သလို၊ ထောပတ်ထက်တောင် ဈေးသက်သာလို့ အများအားဖြင့် ဒါကိုအသုံးပြုကြပေမဲ့၊ ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင် margarine ရောင်းချမှုကို တားမြစ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။
အတည်ပြုချက်တော့ မရှိသေးပေမဲ့၊ Trans-Fatty Acids ဟာ နှလုံးရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အရေပြားတွင်အနီစက်များထွက်ပြီး ယားယံခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ယားယံခြင်း၊ လေပြွန်တွင် ရင်ကြပ်ပန်းနာဖြစ်ခြင်း စတဲ့ Allergic ရောဂါများရဲ့တရားခံလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြင် Trans-Fat ကိုအပြင်သို့ပြန်စွန့်ထုတ်တဲ့အခါ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓါတ်အမြောက်အများ ဆုံးရှုံးရပြန်ပါတယ်။
WHO ဟာလည်း ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စားစရာတွေအားလုံးကနေ လူတွေမှာ Trans-Fat ကိုဖယ်ရှားဖို့ ရည်မှန်းထားပေမဲ့၊ ဂျပန်မှာတော့ ပုံမှန်လိုရောင်းချနေသလို၊ အာဟာရတန်ဖိုးဇယားမှာတောင် ထိန်ချန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။
၂၀၂၃ ခုနှစ်ဟာ နောက်နှစ်ပဲမဟုတ်ပါသလား?
ဘာကြောင့် ဂျပန်မှာတော့ မထိန်းချုပ်ထားတာလဲ? ၎င်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
WHO ဟာ တစ်ရက်မှာ Trans-Fat စားသုံးမှုဟာ စုစုပေါင်းကယ်လိုရီပမာဏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသင့်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ပျှမ်းမျှစားသုံးမှုကတော့ 0.6% ဖြစ်ပါတယ်။
စံသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းအောက်ရှိတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပေမဲ့၊ ဒီကိန်းကဏာန်းတန်ဖိုးဟာ ကလေးငယ်လေးတွေကနေ အသက်ကြီးရွယ်ကြီးတွေအတွက် ပျှမ်းမျှတွက်ထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၀ ကနေ ၄၀ နှစ်ရှိ လူတွေရဲ့အချက်အလက်ကိုထုတ်ယူကြည့်ရင်တော့ တန်ဖိုးဟာ 1 % ကိုကျော်လွန်နေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ စံနှုန်းအောက်နိမ့်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
စတိုးဆိုင်က အစားအစာအတွက် ကိုက်ညီရဲ့လား?
Trans-Fat ဟာ အသီးအရွက်ဆီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆီမှာ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ကို ထပ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ ဆီအတုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရသလဲဆိုရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီက အလွန်မတည်ငြိမ်တဲ့ဆီဖြစ်လို့ပါ။ ပါဝင်ရလွယ်ကူပြီး ကြာရှည်မခံဘူး လို့ဆိုလိုတာပါ။ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ကိုပေါင်းထည့်ပြီး ပစ္စည်းအရည်အသွေး ကျဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆီဖြစ်လာခြင်းဟာ Trans-Fat ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထူးခြားချက်ဟာ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ တာရှည်ခံတဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီအပြင် Convenience store တွေက စားသောက်ကုန်တွေမှာ တင်းကျပ်တဲ့ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းကို လုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ အစာအဆိပ်မသင့်ရလေအောင် စီမံထားကြပါတယ်။
30°C ပတ်၀န်းကျင်မှာ ၂ ရက်ကြာထားသော်လည်း မပုပ်မသိုးဘဲစားသုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ကို လိုအပ်တယ်။
အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းဟာ အစာစားပြီးချင်းဖြစ်ပွားတဲ့အတွက် အကြောင်းအရင်းကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပြီး ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုရှောင်ရှားဖို့ Trans-Fatty Acids ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
စကားမစပ် Trans-Fatty Acids များစွာပါဝင်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကတော့ ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ပိုးထားပြီးမှ ပြန်နွှေးပြီးစားရသည့် အစားအစာ၊
ဒိုးနက်နှင့် ကွတ်ကီးကဲ့သို့ ဖုတ်ထားသောမုန့်များ၊
ဆီနှင့်ရှာလကာရည်ရောထားသည့် အသုပ်သုပ်ရာတွင် သုံးသည့်အရည်၊
ဒီအပြင် Convenience store တွေမှာရောင်းနေတဲ့ ထမင်းဗူးတွေမှာလည်း အမြောက်အများပါဝင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်သူဘက်က ဒီပြဿနာအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာဖြေရှင်းမှု မလုပ်ဘူးလားလို့ပြောရင် အချို့ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ စတင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ Trans-Fat လို့ပြောရင်၊ margarine ကိုတော့မစားသင့်ဘူး၊ ထောပတ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတယ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့၊ သာမန်ထောပတ်တွေမှာလည်း Trans-Fat ပါဝင်နေပြီး၊ ဂျပန်ရဲ့ margarine တွေထဲမှာလည်း ထောပတ်ထက် Trans-Fat ပါဝင်မှုကိုလျော့ချပြီး ထုတ်လုပ်လာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။
မဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့တာဝန်မရှိတဲ့ဂျပန်မှာတော့ ဆုံးဖြတ်ဖို့တော်တော်‌လေးခက်ခဲပေမဲ့၊ အစားအသောက်ထုတ်ပိုးမှုအပေါ်မှာ Trans fat ကိုရေးထားတဲ့အတွက် သတိထားပြီး စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
အစားအသောက်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုချက်ချင်း ဒုက္ခမပေးပါဘူး။ Trans-Fatty Acids ကလည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ စုလာပြီးတော့မှ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဒုက္ခပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းအိတ်ထဲက ပစ္စည်းများ။ ဒီနှစ်တော့ ဘာတွေထည့်ထားမလဲ?
ဘားရှိတဲ့ convenience store
အေးခဲပြီးသေလောက်တဲ့ ဟိုကိုင်းဒိုးမြို့ရဲ့ ဆောင်းရာသီ
ဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 擬態語（ぎたいご）Gitaigo
မကြာခင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ရမယ့် ရုပ်ရှင်ထဲကဆိုင်ကယ်ပျံ